တရားအဆုံးအမများ Archives - BuzzFeed Myanmar
ပြင်ဦးလွင် တွင် လူရမ်းကားတစ်စု၏ မတရားစကေဘာဖြင့်အထိုးခံရသော ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မိုးမြင့်အောင်၏ သံဝေဂ ( ယခုအခါပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါပြီ)
လွန်လေပြီးခဲ့သော ဘဝပေါင်းများစွာမှာ မိမိဘာအကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့မိလည်း မသိခဲ့ပါ ၊ အမြဲမှန်ကန်တဲ့ လောကနိယာမဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စိုက်တာ ကိုယ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမဲ့ အချိန် ကို ရောက်ရှိလာတော့ မိမိလည်း ၂၅.၄.၂၀၁၈ ညချမ်းချိန်ခါ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးအား နှိပ်နယ်ဝတ်ဖြည့်အပြီး အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်စတန့်ထွင်စီးသူ ၇ ယောက်နှင့် ဘဝဝဋ်ကြွေးကို ဆပ်ခဲ့ရပါတယ် ၊ တစ်လုံးမှ စကားမများပဲ မိမိကားကိုဝိုင်းထားပြီး ကားမှန်နှင့် ကားဘောနက်တို့ကို လက်များနှင့်ထုကြပါတယ် ၊ မိမိမှာ သူတို့ကို အတင်းဖြတ်မောင်းပြီး တက်ကျိတ်ပစ်ရန် လုံးဝ ( လုံးဝ ) ဆန္ဒမရှိတာ သစ္စာပြုပြောပါတယ် ၊
ပရဟိတလုပ်ရင်း ငရဲကျသူ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ပရဟိတ အလှူကိုအကြောင်းပြ အဲ့ထဲကငွေကတော့ရေတောင်ဝယ်မသောက်ကြပါနဲ့ ငရဲပြည်တန်းနေတာပဲဘုရားတကာ ကျောင်းတကာတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းအတွက်အလှူခံလှည့်လည်ရင်း အလှူခံခွက်ထဲက အဲ့ဒီထဲကငွေနဲ့ သူဟာကွမ်းဝယ်စားမိတယ်
အလှူခံ က အရေးကြီးသလား … အလှူရှင်က အရေးကြီးသလား
( သီလမလုံတဲ့ဘုန်းကြီး မလှူချင်ဆိုသူများအတွက်…)
❀ မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဝေဿန္တရာမင်း လက်ထက်တုန်းက ဇူဇကာပုဏ္ဏားကြီးကို သားတော်နဲ့ သမီးတော်တွေ လှူလိုက်တုန်းက ဇူဇကာပုဏ္ဏားဟာ ဘယ် သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်မှာလဲ၊ မိန်းမကြောက်လို့ ကလေးတွေကို အဝေးကြီးက လာပြီးတော့ တောင်းတာ၊ သီလ လုံးဝမရှိဘူး။
သင့် ဘဝ မှာ ကူကယ်ရာမဲ့လာတဲ့အချိန် ဒီ ဂါထာ ကို သတိတရ နဲ့ ရွတ်ဖတ်ပေးပါ
သင့်ဘဝမှာ ကူကယ်ရာမဲ့လာတဲ့အချိန် ဒီဂါထာကို သတိတရ နဲ့ ရွတ်ဖတ်ပေးပါ
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား…
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။
ဓားပြ လူဆိုးကြီး ဘ၀ မှ အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်လှမ်းခဲ့သူ (သို့) သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ရှင်ဥက္ကဌရဲ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်
ငွေ ကို ရေလိုသုံး၍ အလျှံအပယ် လှူဒါန်း နိုင်သော ကျင့်စဉ် ဂါထာ တော်
၂၄ ရက် အဓိဌာန်.
နှင်းဆီပန်း၂၄ပွင့် .
တံခွန် ကုက္ကား တစ် စုံ
ဗူး နောက် မှာ အခုသုံး နေ သော ငွေ ၁သောင်းတန် ငါး ထောင် တန် တစ် ထောင် တန် ငါးရာတန် နှစ် ရာတန် တစ် ရာတန် ငါးဆယ် တန် အားလုံးကိုအထပ် လိုက် လှူဒါန်းရပါတယ်
ရွတ် ဆိုရမည် ဂါထာမှာ
နီးကပ်လာသော တဘောင်နှစ်ခု(နိမိတ်တဘောင်ဆိုတာ မယုံကြည်လို့မရဘူး။)
နိမိတ်တဘောင်ဆိုတာ မယုံကြည်လို့မရဘူး။ခုတွေ့လိုက်ရတဲ့ တဘောင်ကို လေ့လာကြည့်ရင် မှန်သင့်သလောက်မှန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နမောလေးပိုင်း လာဘ်တွေဝိုင်း နမောလေးစင်း အကြွေးကင်း နမောလေးချက် စီးပွားတက် အဓိဋ္ဌါန်ကျင့်စဉ်
စာဖတ်သူများအတွက် စေတနာထားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခုခတ်မှာလူတွေကအလွယ်နည်း ကိုအင်မတန်သဘောကျပါတယ်။ အလွယ်မဟုတ်ရင်မလုပ်ချင်ကြတော့ပါ။ အောင်မြင်မှုတခုကိုလွယ်ကူစွာ မရနိုင်ပါ လောကကြီးသဘာဝ တခုကိုအရင်ပေးမှ တခုရပါလိမ့်မယ် ဘယ်အရာမှအလကားမရနိုင်ပါ။